Qorraxda aad doorato waxay muujin doontaa waxyaabo qurux badan oo ku saabsan shakhsiyaddaada - CAALTH PLUS MAG - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » QODOBO "Qorraxda waxay daaha ka qaadi doonaa wax fiican ku saabsan shakhsiyadda aad doorato - DHEERAAD CAAFIMAADKA Maag
Qorraxda aad doorato waxay muujin doontaa waxyaabo qurux badan oo ku saabsan shakhsiyaadkaaga - SANTE PLUS MAG
Welcome / Psycho & Galmada / Cilmi-nafsiga / Horumarka shakhsiyeed /
Qorraxda aad doorato waxay muujin doontaa waxyaabo qurux badan oo ku saabsan shakhsiyaddaada
By: Sarah S
Soo bandhig dhaqamada iyo diimaha badan, calaamadaha qorraxda waa mid aan qarsoodi ahayn. Runtii, qaabka xiddigaan iyo macnaha guud ee qof walba wuxuu muujiyaa sifooyin badan oo aan la garanaynin. Si aad wax dheeraad ah uga ogaatid naftaada, ka samee xulo qorraxda 8 ee sawirkan iyo ogow waxa ka dambeeya shakhsiyaddaada!
Nooca qarsoodiga ah ayaa kugu farxaya oo aad rabto inaad qarxiso siraha? La soco sifooyinkaas qarsoodiga ah ee qaabeeya qof adiga oo dooranaya qorraxda kaa soo jiidata ugu badnaan!
Diyaar ma u tahay inaad ogaato waxa xulashadaada muujisay? Waa kuwan jawaabahaaga si aad u iftiimiso!
Haddii aad dooratay qorraxda ugu horeysa, waxay ka dhigan tahay inaad adigu garab istaagto tamartaada wanaagsan. La-qabsigay, midkani marnaba ma jebin wicitaan si uu u-dhex-maro waqtiyadii u dhex maray saaxiibada. Xaqiiqdii, dabeecadaada furan iyo dareenka ayaa kaa dhigaysa inaad ku kalsoon tahay inaad maamusho talo qiimo leh. Sidaa darteed, marnaba ha ka waaban inaad taageerto kuwa aad jeceshahay iyo inaad u muujisid jacaylka haddii ay dhacdo baahi.
Dhiibitaanka, waxaad ku jirtaa kaydka marka ay timaado inaad la wadaagto dareenkaaga. Waxaad doonaysaa inaad ilaaliso xakamaynta khaaska ah ee asturnaantaada oo aadan ka helin galmo aan loo baahneyn. Qaarkood waxay ku jahwareeraan habdhaqankaaga qabow, laakiin taasi ma noqon karto mid khalad badan. Runtii, roonaanta iyo daacadnimadu waa qiimo muhiim u ah adiga iyo adiga Amis iyaga oo u dhow waa ay ka warqabaan.
Murugo, geesinimo iyo jaah-wareer, macaluul iyo kuwa aan la aqoon waxay kugu cabsiinayaan. Soo bandhigtay sirdoonka fiican iyo awood dabiici ah in dadka kale ka dhaansado in aad, aad ugu aura difaac oo dhigaya dhigaalka si dhakhso ah trust dadka kale. Waligood ha ka waaban inay raacaan maxaa yeelay waxay ogyihiin in xukunkaagu yahay mid caddaalad ah oo daacad ah.
U diyaarso noloshaadii ugu sarreeyaa waa sheygaaga maalinlaha ah. Adigoo wadata duufaan fikrado khafiif ah, waxaad ku jirtaa dhinacyada oo dhan si aad uga faa'iidaysato fursadaha kasta ee soo socda. Xaqiiqdii, firfircoonidu waa halyeey iyo tamartaada marnaba wiiqayso. Adiga, wax tartan ah maaha mid aad u adag, taas oo ka dhigaysa qof aad u hanweyn.
Cajiib ah oo taxadar leh, waxaad tahay il dhab ah oo taageero ah dadka kale, kuwaas oo aan ka waabanin inay kugu soo kiciyaan talo si aad u hesho. Ka fogaansho adiga, xaaladahani waxay kobciyaan jihadaada adigoo cadeynaya in aad ka caawineyso in aad hagaajiso adduunka kugu xeeran. Sababtan awgeed, caawinta dadka agagaarku wax dhibaato ah kuma qabaan, ugu yaraan ...
Haddii aad dooratay lambarka lix qoraxda, waxaad tahay qof aad u khaas ah! Qaab dabacsanaan iyo farxad leh maalin kasta, uma ogolaanaysid naqdinta dadka kale si ay kuu gaarto. Taas bedelkeeda, waxaad u isticmaashaa si aad u hagaajisid oo aad u korto noloshaada. Waxaad u aragtaa aragti wanaagsan oo ah caqabado aan la fileynin oo tixgelin kasta oo caqabad ah sida darsi cusub oo leh casharo faa'iido leh.
Riyadaadu ma yaqaaniin wax xuduud ah. Go'aaminta inaad ku guulaysato waxa adiga muhiim kuu ah, waxaad ku dadaaleysaa inaad mashaariicdaada u keento nolosha. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la xalliyo waxyaabaha mudnaantaada leh sababtoo ah dhamaanba rabitaankaada oo dhan lama wadaagi karo. Ka fogow cilladda, dulqaadkaaga iyo hamigaadu waxay dhiirigelisaa dhammaan kuwa garbaha kuugu soo riixaya. Waxaad leedahay aura aad u fiican.
Maamulida caqli-galka, go'aankaaga ayaa had iyo jeer sax ah oo ku habboon dhibaatooyinka aad la kulmeysid. Waad ku mahadsantahay baqdintaada iyo pragmatism-kaaga, waxaad ka fogaataa inaad si dhaqso ah u dhaqantid oo aad u qaadatid wakhti aad ku fikirto ka hor inta aadan bilaabin xaalad aan la garanaynin. Si kastaba ha noqotee, dareenka kuma guuleystaan ​​adiguna waad garanaysaa sida loo muujiyo macaan iyo jilicsan marka loo baahdo.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore DARYEELKA CAAFIMAADKA MASKAXDA
Tetris 99: Saddexleyda Saddexleyda ah ee T-Spins, Tributes Tribute Ken Kennedy
Qarsoodiga ugu qarsoon ee shakhsigaaga, sida ku cad calaamadda joodajiyaha - CAYMISKA PLUS MAG